ट्या a्की कसरी बनाउने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
ट्या a्की कसरी बनाउने?
तपाइँ ट्या ways्कन बिभिन्न तरीकाले तान्न सक्नुहुन्छ, प्रक्षेपणमा भन्नुहोस्। यदि तपाईं योजनाबद्ध रूपमा काटिएको पिरामिडको लागि आधार सेट गर्नुभयो (वा सजिलो, चित्र बक्सहरू) उदाहरणका लागि, र मात्र ट्या the्कको सबै साना भागहरू कोर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै छन्, र कार्यको लागि प्रयास, धैर्य र समय आवश्यक पर्दछ।
विशेष ध्यान बन्दूक र ट्र्याकमा तिर्नु पर्छ:
ट्या a्की कसरी बनाउने
हामी गुम्बजबाट ट्या tank्की कोर्न को लागी शुरू र तल सार्न।
अर्को, ट्या tank्कीको माथिल्लो भाग विस्तृत रूपमा तान्नुहोस्।
त्यसपछि आरक्षण कोर्नुहोस्।
एउटा ट्र्याक कोर्नुहोस्। र अगाडि हामी कवचको तल्लो तान्दछौं।
हामी धेरै पाels्ग्रा कोर्दछौं।
र अन्तिम चरण: हामी अतिरिक्त रेखाहरू मेटाउँछौं र आवश्यक सर्कलहरू पेन्सिलको साथ चित्रित गर्दछौं। परिणाम यस प्रकारको छ।
ट्या tank्ख कोर्न यो एकदम सजिलो छ, विशेष गरी यदि यो बच्चाको साथ मनोरञ्जनात्मक खेल हो र हाम्रो ड्राइंग कला क्लबमा प्रतिस्पर्धी हुने बहाना गर्दैन। पहिले तपाईंले ट्या tank्की बडी तान्नु पर्छ जुन ट्र्याक्स, आधार र तथाकथित टावर हो जसमा ट्या the्की बन्दूक अवस्थित हुनेछ। र त्यसपछि हाम्रो कल्पना पहिले नै काम गर्दछ। हुनसक्छ यस भिडियोसँग केहि उपयोगी छ। भिडियो लिंक
माथि तिनीहरूले आयताकार आकारहरूको माध्यमबाट ट्या tank्की ड्रइ suggested गर्न सुझाव दिए, तर मलाई लाग्छ यो अंडाकारको माध्यमबाट उत्तम छ, केहि यस्तोः
सब भन्दा गाह्रो कुरा क्यापिलर बनाउनु हो, तर मलाई लाग्छ कि केवल एक अंडाकार अर्कोमा र थप ड्यास।
ट्या tank्क प्राकृतिकताको बिभिन्न डिग्रीको साथ कोरिन सकिन्छ। म एउटा प्यारा र शान्त ट्या tank्की कोर्न को लागी प्रस्ताव गर्दछु जसले बच्चाहरूको रेखाचित्र र ग्रीटिंग कार्ड दुबै सजाउनको लागि धोउनेछ। थप त्यहाँ एक सानो मास्टर वर्ग हुनेछ:
र यदि तपाईं पूरै राम्ररी ट्या a्की ड्रइ of गर्ने प्रक्रियामा पुग्नुभयो भने, यो फिगरमा सजावट गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। तपाईं एक उत्कृष्ट अमेरिकी कार्टुनको रूपमा एक ट्या tank्क प्राप्त गर्नुहुनेछ। पाels्ग्राहरू मुनिको धुलोले यसलाई सीधा एकदम वास्तविक बनाउँदछ!
सबैभन्दा सस्तो ट्या tank्क देखाइएको अनुसार कोर्न सकिन्छ। यो गर्नका लागि तपाईले पहिले ट्या tank्की हिल तर्नु पर्छ, त्यसपछि वीणा, त्यसपछि सबै कुरा ताकि त्यसलाई आइस रिink जस्तो देखिन्छ। अवश्य पनि, बन्दुक कोर्नुहोस्। जब सबै हुनेछ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोरिएको छ, त्यसो भए तपाईले पहिले नै ट्या the्क सुशोभित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं ट्या the्कको रंग आफैं रोज्न सक्नुहुन्छ, ट्या tank्क हुनुपर्दछ यो आवश्यक छैन हरियो बत्ती
तल्लो भाग: ट्र्याकहरू, शरीर।
माथिल्लो भाग: टावर, थूथन बन्दूक, ईन्धन ट्याks्क
ध्यान दिनुहोस् जब रेखाचित्र तत्वहरूको सममितिमा भुक्तान गरिनुपर्दछ, किनकि ट्या tank्कमा लगभग समानान्तर र अंडाकार क्षेत्र हुन्छ, समरूपित विकृति धेरै सजिलै देखिन्छ।
भिडियोले एक साधारण ट्या tank्की कोर्ने प्रक्रिया देखाउँदछ।
ट्या tank्की कोर्न, वा कुनै अन्य वस्तु गर्न गाह्रो छैन यदि तपाईं म्यानुअल प्रयोग गरेर चरणहरूमा चित्रण गर्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि तपाईलाई केवल पेन्सिल, कागज र वाशकोलोथ मात्र चाहिन्छ। चरणहरूमा ट्या tank्की कसरी खिच्ने भन्ने नमूनाको लागि, तपाईं उदाहरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,380 प्रश्नहरू।